Tongasoa eto amin'ny sambo 'n’ oar
Classic Self Manaova drafitra sy Boat kely ny Endriky
Novolavolain'ny John Sheen, mipetraka any Cowes Isle of Wight any Royaume-Uni, ireo no teti-dratsy Notsapaina sy nosedraina mifototra amin'ny sambo ny androm-piainany eo amin'ny trano.
Ny lamina nanome ny Sail'n'Oar dia araka ny marina lotika afa-tsy ny mpanorina ny fotoana sy ny vola be. Tsy fotsiny izy ireo mba hanampy amin'ny fanaovana ny rafitra hanorenana ny sambo eo, Raha ny marina tsy misy izay ilaina. Nanaovana ny fananganana no noforonina mba hampihenana ny trano fotoana. Tsy misy ilaina ny habeny sary, ho môdely sy ny mpanora-dalàna manodidina ny faritra sarotra. Fotsiny mametraka ny lamina ambonin'ny kitay, Marka manodidina ka nanapaka avy.
Easy Manaova Projects – Ny isan-karazany Classic Boat drafitra anareo hanao
N lay oar fandefasana Trolley
Mampiasa ny zavatra tokony marika sy hokapaiko ny hazo lavitra kokoa ara-toekarena noho ny mividy ny fitaovana sambo izay mandoa ny manana notapahina tamin'ny endriny fa ho mora foana ny tenanao mitantana. Ianao, dia azo inoana fa afa-be eo ny vola lany ny hazo sy ny gitara koa.
Ny ankamaroan'ny rehetra dia manana ny fahafaham-po ny famoronana ny mahazatra sambo izay mba hireharehana, ary ny pananana ny fianakavianao ny taona maro ho avy.
Download voalohany ny boky fampianarana, hividy ny fomba mandimby anao Nahita fomba tsotra izany dia afaka ny ho. Lamina dia nanakodia, ary tsy manana ahiahy feno ao amin'ny fantsona. Nirahina izy ireo tamin'ny alalan'ny iraka ho any an-tranonao na ny atrikasa.
Niondrana an-tsambo 'n’ Oar FLATTIE SKIFF – Ho an'ny antsipirihany Click Here
Misaotra anao hitsidika ny Website